Somalia: Maxkamadda Ciidamada oo maanta xukun toogasha ah fulisay - Wargane News
Home Somali News Somalia: Maxkamadda Ciidamada oo maanta xukun toogasha ah fulisay
Maxkamadda Ciidamada Qalabka sidda ee Soomaaliya ayaa maanta waxaa ay xukun dil ah ku fulisay nin ay ku eedeysay in uu waday gaari ku Qarxay Suuqa Beerta ee degmada Waaberi.
C/qaadir Cabdi, ayaa waxaa gacanta ku dhigay ciidamada ammaanka, isla maalintii uu Qaraxa dhacay.
Sidoo kale Qaraxii Suuqa waxaa uu ka dhashay baabuur walxaha qarxa laga soo buuxiyay oo la dhigay suuqa beerta ee degmada Waaberi.
Dhinaca kale 12-kii Bishii April, Ururka Midowga Yurub ayaa sheegay inuu ka xun yahay dilkii toogashada ahaa ee dhowaan Maxkamadda ciidamadda Puntland ay ku fulisay shan dhalinyaro oo lagu eedeeyay inay ka tirsanaayeen Al-shabaab, islamarkaana maxkamaddu sheegtay inay ku heshay inay ka dambeeyeen dilkii Saraakiil ka tirsanaa maamulka Puntland.
Qoraalka ka soo baxay midowga Yurub waxaa si weyn loogu cambaareeyay falalka argagixisada iyo cidka kasta oo taageerta, hase yeeshee waxay tilmaameen in xukunka dilka marnaba aheyn qaab ciqaabeed baajinaya falalka argagixisnimada ama fal-dambiyeedyada.
Midowga yurub waxay sheegeen inay ka go’antahay xoojinta nidaamka garsoorka Soomaaliya iyo horumarinka dhaqanka sharciga iyo cadaallada, iyagoo ballanqaaday inay ka caawin doonaan sidii maamulada Soomaalida ay u joojin lahaayeen isticmaalka ciqaabta dilka.
Maxkamadda Ciidamada Qalabka sidda
Somaliland: Guddoomiyaha KULMIYE oo soo Dhaweeyey Go’aanka Golaha Guurtida ee Muddo-kordhinta